Samson tuaa Filistifo no so ka (1-20)
15 Bere bi akyi, bere a na wɔretwa hwiit no, Samson faa apɔnkye ba bi, na ɔkɔsraa ne yere. Na ɔkae sɛ: “Mepɛ sɛ mekɔ me yere nkyɛn wɔ pia mu.” Nanso ɔbea no papa amma wankɔ. 2 Na ɔbea no papa kae sɛ: “Mehwɛ a, ‘Wotan no.’+ Enti mede no ama wo nnamfo no baako, ayeforokunu nnamfo no.+ Wunhu sɛ wo yere nuabea kumaa no ho yɛ fɛ sen no anaa? Enti mepa wo kyɛw, fa ɔno mmom.” 3 Ɛnna Samson ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Eyi nko ara de, sɛ meyɛ Filistifo no bɔne a, obiara rentumi nka hwee nkyerɛ me.” 4 Enti Samson kɔe, na ɔkɔkyeree sakraman 300. Afei ɔfaa agyatɛn,* na sɛ ɔfa sakraman abien biara a, na wakyekyere wɔn dua abom, na ɔde gyatɛn baako ahyɛ mu. 5 Afei ɔsosɔɔ agyatɛn* no ano gya na ɔpam sakraman no kɔɔ Filistifo no hwiit* afuw mu. Ɔhyew biribiara, hwiit* a wɔatwa aboa ano ne nea wontwae, bobe mfuw ne ngodua mfuw nyinaa. 6 Ɛnna Filistifo no bisae sɛ: “Hena na odii saa dwuma yi?” Na wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛyɛ Samson, Timnani no ase no, efisɛ wagye ne yere afi ne nsam de no ama n’adamfo.”+ Bere a Filistifo no tee saa no, wosiim kɔe, na wɔde ogya kɔhyew ɔbea no ne ne papa.+ 7 Ɛnna Samson ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Nea moayɛ yi, gye sɛ mitua mo so ka ansa na me ho atɔ me.”+ 8 Na ɔbobɔɔ wɔn kunkum wɔn mmaako mmaako;* okum nnipa bebree. Afei ɔkɔtenaa ɔbotan bi tokuru mu wɔ Etam. 9 Akyiri yi, Filistifo no bae, na wɔbɛkyekyee asoɛe wɔ Yuda, na wɔtew wɔn ho guu Lehi+ kurow no mu. 10 Na Yudafo no bisae sɛ: “Adɛn nti na moaba yɛn so yi?” Ɛnna wɔkae sɛ: “Yɛaba sɛ yɛrebɛkyere* Samson, na yɛayɛ no nea ɔyɛɛ yɛn no bi.” 11 Enti Yudafo mmarima 3,000 kɔɔ Etam botan tokuru no mu, na wokobisaa Samson sɛ: “Adɛn, wunnim sɛ Filistifo na wodi yɛn so?+ Enti adɛn nti na woayɛ yɛn saa?” Ɛnna ɔno nso ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Nea wɔde yɛɛ me no, ɛno ara bi na mede ayɛ wɔn.” 12 Na wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Yɛaba sɛ yɛrebɛkyere* wo na yɛde wo akɔma Filistifo no.” Ɛnna Samson ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monka me ntam sɛ mo ara de, morenyɛ me hwee.” 13 Na wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Daabi, yɛrebɛkyekyere wo kɛkɛ na yɛde wo akɔma wɔn; yɛrenkum wo.” Enti wɔde nhama akɛse abien a ɛyɛ foforo kyekyeree no, na wɔde no fii ɔbotan no mu puei. 14 Na bere a oduu Lehi no, Filistifo no de nteɛteɛm ne ahurusi hyiaa no. Na Yehowa honhom maa no ahoɔden,+ na nhama akɛse a wɔde akyekyere ne nsa* no yɛe sɛ asaawa a wɔde ogya aka, na nhama no tetew* fii ne nsa ho.+ 15 Afei ohuu afurum bi a owui nkyɛe apantan, na ɔtwee ne nsam fae, na ɔde kunkum mmarima 1,000.+ 16 Ɛnna Samson kae sɛ: “Afurum apantan, mede akunkum wɔn asum hɔ, kuw baako, akuw abien! Mede afurum apantan akunkum mmarima 1,000.”+ 17 Bere a ɔkasa wiei no, ɔtow apantan no kyenee, na ɔtoo hɔ din Ramat-Lehi.*+ 18 Afei osukɔm dee no paa, na ɔsrɛɛ Yehowa sɛ: “Wo na wonam w’akoa so ama ogye kɛse yi aba. Seesei worebɛma osukɔm akum me ama nnipa a wontwaa twetia* yi akyere me anaa?” 19 Enti Onyankopɔn maa tokuru bi a ɛwɔ Lehi mu baee, na nsu fii mu bae.+ Bere a ɔnom nsu no wiei no, ɔsan nyaa ahoɔden,* na ne ho san sisii ne ho so. Ɛno nti, ɔtoo hɔ din En-Hakore,* na ɛwɔ Lehi de besi nnɛ. 20 Na obuu Israelfo atɛn mfe 20 wɔ Filistifo bere so.+
^ Nt., “ɔbobɔɔ wɔn nan ne wɔn srɛ.”
^ Anaa “yɛrebɛkyekyere.”
^ Anaa “nan.”
^ Ɛkyerɛ, “Apantan Bepɔw.”
^ Anaa “ne honhom san bae.”
^ Ɛkyerɛ, “Ɔfrɛfo Asuti.”